Sawirro: Raisalwasaare Khayre “Haweenka Soomaaliyeed waa inay hormuud u noqdaan xoreynta dalka”
arlaadi November 14, 2017 No Comments
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka qeyb galay munaasabad ay Haweenka Soomaaliyeed ku taageerayeen ciidamadda qaranka oo ay soo qaban-qaabisay Wasaaradda Dhalinyarada Ciyaaraha, isla markaana ay ku muujinayeen doorkoodu ku aadan xoreynta dalka.
Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa kula dardaarmay haweenka Soomaaliyeed inay hormuud u noqdaan dagaalka dalka looga xoreynayo kooxada Alshabaab, wuxuna xusay in haweenku ay yihiin bad-baadiyaha qaranka kaalin muuqatana ka soo qaateen halgankii xorriyadda iyo xiliyadii adkaa ee dalku soo maray.
Xasan Cali Khayre ayaa tilmaamay in Xukuumadda ka go’an tahay dumarku inay door fir-fircoon ku yeeshaan siyaasadda iyo go’aamada lagu hagayo dalka.
“Go’aanka in 30% kuraasta xildhibaannada Baarlamaanka loo qoondeeyo haweenka waa tallaabo dhaxalgal ah oo loo qaaday dhanka wanaajinta doorka dumarku ugu qayb-qaadanayaan gaarista go’aamada muhiimka u ah dalka.
Hadda wixii ka dambeeyana waxaan ka shaqeyn doonaa in dumarku ay helaan fursado ka badan kuwii hore” ayuu yiri R/W Khayre.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ugu baaqay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iney garab istaagaan ciidamadda, si meesha looga saaro dhibaatada ay dalka iyo dadka ku hayso Alshabaab waa sida uu hadalka u dhigaye.